Donald Trump oo noqday madaxweynaha 45 ee Mareykanka - BBC News Somali
Donald Trump oo noqday madaxweynaha 45 ee Mareykanka
Play video Trump oo la caleema saaray Video
Trump oo la caleema saaray Toos
Play video Trump oo la caleema saaray
Donald Trump ayaa si rasmi ah u nqoday madaxweynaha 45 ee dalka Mareykanka
Wuxuu xilka kala wareegay Barack Obama
Trump ayaa jeediyay khudbad isagoo sheegay in uu mudnaanta koowaad siin doono danaha Mareykanka
Dad taageersan iyo dad diidan Trump ayaa ku sugan Washington iyadoo Sabtidana la filayo inuu dhaca muddaaharaad ballaaran
Posted at 20:15 20 Jan 2017
Intaas ayaan ku joojinay tebintii tooska ahayd!
Waadna ku mahadsantihiin la socoshadiina meel kastoo aad dunida ka joogtaan.
Posted at 20:01 20 Jan 2017
Taageerayaal Trump oo "ku dhintay" Nigeria
Booliska Nigeria ayaa gaas u adeegsaday dibad baxayaal si ay u kala ceyriyaan.
Dibad baxayaasha ayaa taageeraayay Donald Trump, sida wararka ay sheegayaan.
Koox ka mid ah dibad baxayaasha waxay sheegayaan in 11 qof ay rabshada ku dhinteen, balse booliska ayaa beeniyay.
Dibad baxa waxaa qaban qaabiyay koox dooneysa in Trump uu aqoonsado madaxbannaanida Biafran ee qowmiyadda Igbo.
Posted at 19:55 20 Jan 2017
Dibad baxayaal lagu xiray Washington DC
Sarkaal ka mid ah Booliska Washington DC ayaa BBC-da u sheegay in 95 qof oo dibad baxayaal ah lagu xiray magaalada.
Laba askeri ayaa ku dhaawacantay dibad baxyada oo ay sameynayaan dad diidan madaxtinimada Trump.
Posted at 19:40 20 Jan 2017
Dibax baxyada oo gaaray Washington
Wararka ka imaanaya Mareykanka ayaa sheegay in magaalada Washington uu ka socdo dibad bax ka dhan ah madaxtinimada Trump.
Posted at 19:22 20 Jan 2017
Dibad baxyo ka dhan ah Trump
Meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah ayaa laga soo sheegayaa dibad baxyo ka dhan ah Trump.
Mareykanka Gudihiisa ayaa sidoo kale dibad baxyo ay ka socdaan.
Posted at 19:07 20 Jan 2017
Xoghayaha arrimaha dibadda ee UK oo u hambalyeeyay Trump
Xoghayaha arrimaha dibadda ee UK, Boris Johnson ayaa madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump ugu hambalyeeyay xilka uu la wareegay, wuxuu sheegay in Britain ay kala shaqayn doonto ammaanka iyo horumarka caalamka.
Posted at 18:58 20 Jan 2017
Sawirada labada madaxweyne laga wada qaaday
Trump iyo Obama
Trump oo isu doiyaarinaya shaqada
Heesta Qaranka oo ay qaadayaan
Obama iyo Trump iyo xaasaskooda
Ayagoo is macsalaameynaaya
Posted at 18:48 20 Jan 2017
Is barbardhig xilligii Obama iyo Trump
Xilligii la dhaarinayay Obama ee 2009-kii ayaa ka dad badneyd maanta oo Trump loo dhaariyay xilka madaxweynaha Mareykanka.
Posted at 18:42 20 Jan 2017
Shan arrimood oo Trump uu ka yiri Soomaalida
Aan dib u milicsano shan arrimood oo Donald Trump uu ka yiri Soomaalida
Posted at 18:35 20 Jan 2017
DAAWO: Trump iyo reerkiisa oo aqalka cad ku damaashaadaaya
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo reerkiisa oo dhex fadhiya kuraastii ay Obama iyo reerkiisa ay ku fariishan jireen.
Posted at 18:25 20 Jan 2017
Obama oo u mahadceliyay taageerayaashiisa
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa yiri: "Markaan bilownay safarkan, waxaan sidaas ku sameynay isku kalsoonaan ka timi shacabka Mareykanka iyo awoodooda, si aan gacmaha isu qabsano oo dalkan aan u badalno."
Waan ognahay "is bedelka kama yimaado kor ee hoos ayuu ka bilowdaa".
"This has been the privilege of my life," Obama says at Joint Base Andrews. bos.gl/mgHresh
6:17 p.m. - 20 January 2017
Posted at 18:09 20 Jan 2017
Daawo: Trump oo Aqalka Cad ka macsalaameeyay Obama
Posted at 18:06 20 Jan 2017
Obama iyo xaaskiisa ayaa raacay diyaaarad milatari oo geysay Andrews Air Force Base.
Diyaarad kale ayay ka sii raaci doonaan iyagoo damaashaad iyo dalxiis u aadi doono gobolka California.
Madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden iyo xaaskiisa ayaa waxay raaci doonaan tareen u soo qaadi doona gobolka ay ka soso jeedaan ee Delaware.
Obama oo ka tagay Washington
Posted at 18:05 20 Jan 2017
Malaayiin qof oo daawaneysay dhaarinta Trump
Malaayiin qof ayaa daafaha caalamka ka daawanayay xafladda Trump uu kula wareegay xilka madaxweynaha ee Mareykanka.
Daawadayaal Ruushka ku sugan
Dad ka daawanayay Albaniya
Posted at 17:55 20 Jan 2017
Trump oo loo sabciyay markii uu "xagjir" isticmaalay
Trump inuu soo qaado " argagixisada muslimka xagjirka ah" waxay noqotay mid loo sabciyay oo daawadayaasha ay soo dhaweeyeen.
Madaxweynaha cusub ayaa Obama ku eedeeyay inuu ka fogaaday isticmaalka ereyadaas.
Obama ayaa diiday inuu in ka badan hal biyan oo qof oo Muslimiin ah oo daafaha caalamka ku nool uu la mid dhigo tiro yar oo "mintidiin" uu ku sheegay.
Trump iyo ku xigeenkiisa
Posted at 17:50 20 Jan 2017
Sawir: Markii la dhaarinayay Trump
Sawirka madaxweynaha cusub markii la dhaarinayay. Waxaa barbar taagan xaaskiisa Melania iyo wiilkiisa Barron.
Posted at 17:44 20 Jan 2017
Daawo: Dhaarinta Trump sida ay u dhacday
Donald Trump hadda waxaa gacanta ugu jiro lambarka sirta ee hubka nukliyerka iyo go'aanka dalkaasi.
DAAWO: dhaarinta Donald Trump oo noqday Madaxweynaha 45-aad ee mareykanka. Halkan kala soco wararka ugu dambeeya.… twitter.com/i/web/status/8…
5:34 p.m. - 20 January 2017
Posted at 17:39 20 Jan 2017
Obama iyo reerkiisa oo guuray
Madaxweynihii hore Obama iyo reerkiisa ayaa si rasmi ah uga wada guuray aqalka cad.
Donald Trump iyo qoyskiisa ayaa la wareegay xafiiska Mareykanka looga arrimiyo.
Posted at 17:28 20 Jan 2017
Obama: 'Shaqo wanaagsan, shaqo wanaagsan'
"Dhageyso ereyadan. mar dambe laguma diidi doono." ayuu yiri Trump.
"Si wada jir ah ayaan Mareykanka mar kale uga dhigi kartaa barwaaqo".
"Mareykan waxaan markale ka dhigi kartaa wadan isla weyn".
"Haa, Mareykale Mareykan waxaa ka wada dhigi karnaa wada weyn".
Obama waxaa la arkay asigoo dhahaya "Shaqo wanaagsan, shaqo wanaagsan".
"From this day forward it's going to be only America first" - President Donald Trump says bbc.co.uk/inauguration… twitter.com/i/web/status/8…
5:16 p.m. - 20 January 2017
"Waligiin midnimada raadiya"
"ma jiri doonto wax aad ka cabsataan," ayuu yiri ka hor inta uusan amaanin laamaha ammaanka.
"Wax walbe waxaa ka muhiimsan Illaahay ayaa ina ilaalin doona" ayuu u sheegay dadkii xafladda joogay.
Posted at 17:17 20 Jan 2017
"Waxaan mideyndoonnaa dunida ilbaxday si ay ula dagaasho islaamka xagjirka ah, taas oo dunida aan ka sifeyn doono". ayuu yiri Trump
Twitter-kii rasmiga ahaa oo Trump lagu wareejiyay
Iyadoo ay socoto khudbadda madaxwayne Trump, waxaa rasmiyan loogu wareejiyay Twitterkii rasmiga ahaa ee madaxtooyada, waxaana durba la tirtiray kuwii Obama uu qorijiray oo dhan.
Shaqa siinta Amerikaanka
"Dadka waxaan ka celindoonnaa ceyrta, waxaana ku celineynaa shaqada. Waxaan raaceynaa sharciyo fudud. Amerikaanka shaqo sii waxna ka iibso."
Posted at 17:13 20 Jan 2017
"Awooda shacabka ayaan ku celineynaa"
Madaxweynaha mareykanka ayaa sheegay "Waxaan awoodda ka qaadeynaa Washington, waxaana dib ugu celineynaa shacabka.
Trump ayaa intaas ku daray "Washington way camiran tahay balse shacabka lameysan wadaagin dhaqaalaha".
Gaariga madaxwaynaha ma shidaalkaa laga tijaabinayaa?
Magaalada Washington waxaa buux dhaafiyay dad badan oo funaanado qaba oo qaarkood ay Trump taageersan yihiin, qaarna ay ka soo horjeedaan.
Trump oo u mahadceliyay Obama
Donald Trump, Madaxweynaha mareykanka ayaa u mahadceliyay madaxweynihii hore Barack Obama.
Posted at 17:01 20 Jan 2017
War deg deg ahDonald Trump oo la dhaariyay
Donald Trump ayaa si rasmi ah u noqday madaxweynaha Mareykanka ee 45-naad.
Wuxuu xilka kala wareegay Obama oo tan iyo 2008-dii ahaa madaxweynaha Mareykanka
Mike Pence oo la dhaariyay
Madaxwayne ku xigeenka la doortay Mike Pence ayaa xilka loo dhaariyay.
.@Mike_Pence has been sworn in as vice president of the #UnitedStates. Watch the #inauguration live:… twitter.com/i/web/status/8…
Dhaarinta madaxweyne ku xigeenka
Garsooraha maxkamadda sare ee cadaaladda Clarence Thomas, waa qofka keli ah ee madow ee ka qeybgalay dhaarinta madaxweyne ku xigeenka Mike Pence.
Posted at 16:51 20 Jan 2017
Helikobtar lagu sii qaadi doono Obama
In kastoo Obama uu kol dhow ka tagi doono shaqada taliyaha guud ee ciimada ayaa weli helaya soo dhoweyn wanaagsan, wuxuuna isticmaalayaa diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah.
Trump oo kala qaybin lagu bartay ayaa la filayaa in uu midnimo ku baaqo
Madaxwaynaha la doortay ee dalka Maraykanka ayaa aqalka cad la wareegaya isaga oo taageeradiisu yartahay, Sidee Trump ku midayn karaa dadka Maraykanka isaga oo lagu bartay kala qaybin?.
Posted at 16:38 20 Jan 2017
Melania oo sii fuulaysa masraxa
Xaaska Trump Melania ayaa sii fuulaysa masraxa iyada oo uu weheliyo askari Maraykan ah.
Iyada iyo wiilkeeda Barron, durba uma wareegi doonaan Washington Dc, waxayna sugi doonaan inta uu sanad dugsiyeedku uga dhamaanayo wiilkan toban jirka ah.
Arrinta nukliyerka iyo amniga Aasiya
Madaxtinimada Trump waxay su'al weyn gelisay amniga Aasiya.
Madaxweynaha cusub, hadalladiisa kuma goobneyn Shiinaha oo keli ah, balse xoghayihiisa cusub wuxuu sheegay in Shiinaha ay ka mamnuucayaa Jasiiradda lagu muransan yahay.
Wuxuu ka digay in isku dhac militari uu ka dhici karo halkaasi,
Japan iyo Kuuriyada Koofureed waxay si weyn ugu tiirsan yihiin Mareykanka.
Trump wuxuu sheegay inay si weyn uga faa'ideen Mareykanka oo ay xittaa heleen nukliyer u gaar ah.
Waxaa sidoo kale jirto in dowladda Kuuriyada Waqooyi ay dhwoaanahan hormarineysay hubkeeda Nukliyerka.
Macadda sida uu u wajahaayo arrimahaasi iyo inuu la hadlaayo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
Mr Kim ayaa dhowaantan sheegay inuu diyaar yahay inay helaan kantaal riddo dheer taas oo Trump uu ku tilmaamay "inaysan weligeed dhicidoonin".
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un oo eegaya nukliyerka dalkiisa
Posted at 16:26 20 Jan 2017
Trump iyo Obama ka hor inta aysan ka bixin Aqalka Cad
Qoysaska Trump iyo Obama oo ku kulmay Aqalka Cad
Trump iyo Obama oo sii socda
Madaxwaynaha xilkiisu dhamaaday ee dalka Maraykanka Barack Obama iyo madaxwaynaha la doortay ee dalka Maraykanka Donald Trump ayaa ka baxay Aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka iyaga oo ku sii jeed xalfadda caleemo saarka.
Posted at 16:21 20 Jan 2017
Obama oo mar soo horreysay ka soo baxay xafiiskiisa
Obama oo xafiiska Oval-ka soo baxay
Posted at 16:19 20 Jan 2017
Digniin loo diray dadka Maraykanka ah ee Kanada ku sugan
Qunsuliyadda dalka Maraykanka ee Montreal ayaa soo saartay “fariin ammaaan” muwaadiniinta Maraykanka ayaana loogu baaqayo in ay feejignaadaan maadaama oo la qorshaynayo in ay dibad baxyo dhacaan.
Dalka Kanada oo dhan ayaa laga qorshaynayaa dibad baxyo Trump lagaga soo horjeedo oo kala dhici doona Jimcaha iyo Sabtida.
Jimmy Carter iyo xaaskiisa oo gaaray goobta dhaarinta
Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka, Jimmy Carter, iyo xaaskiisa ayaa gaaray US Capitol oo ah goobta lagu dhaarin doono Trump.
Carter, oo ah kan ugu da'da weyn madaxweynayaasha hore ee nool oo dhawaan ka soo kabtay cudurka kansarka ayay weriyayaashu weydiiyeen talada uu u hayo Trump, wuxuu ku jawaabay.
''Shaqa fiican ayaan ka filayaa, iyo inuu runta ka hadlo''.
On the 40th anniversary of his own inauguration -- Jimmy Carter arrives at @realDonaldTrump's inauguration.
3:48 p.m. - 20 January 2017
Posted at 16:12 20 Jan 2017
'Qof walba ma noqon karo sida aad rabto in uu noqdo'
Weriyaha BBC, Tara McKelvey ayaa su'aalo waydiinaya dadka kusugan wadooyinka DC.
"Waxaan rajaynayaa in madaxwaynaha cusub uu adduunka dhanka nabadda u jihayn doono" ayuu yiri Chanty Sem oo reer Kambodhiya ah oo ku sugan Phoenix.
Wadooyinka aagaas ka dhawna waxaa ka soo uraya marijuana.